Madaxweyne wadankiisa caasimad cusub u sameynaya maxayse tahay sababtu? – SBC
Madaxweyne wadankiisa caasimad cusub u sameynaya maxayse tahay sababtu?
Posted by editor on Diseenbar 20, 2012 Comments
Hogaamiyaha ugu xukunka dheer madaxda qaarada Afrika ayaa la xaqiijiyey in uu go’aansadey dhismaha caasimad cusub oo uu dalkiisa u sameeyo taasi oo dhismaheeda sagxada hose laga soo bilaabayo, waxaana arintan Madaxweynuhu uga gol leeyahay xaaladdo dhanka amaanka ah.
Madaxweynaha wadanka Equatorial Guinea ee ku yaal Galbeedka Qaarada Afrika Mr Teodoro Obiang wuxuu ku qarash gareyn doonaa dhismaha caasimada cusub oo dhulka laga soo bilaabayo malaayiin doolar, iyadoo arintan ay ku soo beegmayso xili dadka wadankaasi ay haysato faqiirnimo, oo ay ku nool yihiin in ka yar 2 doolar maalintii.
Dhismaha caasimadan oo lagu wado inay soo gabagabowdo sanadka 2020 waxaa la qorsheeyey in laga dhiso jaamacad caalami ah oo loogu magac daray International University of Central Africa , hotel nooca five star-ka ee raaxada oo ka kooban 450 qol, garoomo lagu ciyaaro ciyaaraha golf-ka iyo waliba goobo kale oo soo jiidasho leh.
Dalka Equatorial Guinea oo saaran badda Atlantic-ga waxaa ku nool yihiin dad tiradoodu gaarayso 700 kun oo oo kaliya, waxaa qorshuhu yahay inay caasimada cusub oo lagu magacaabo Oyalo u guuraan 200 kun oo qof, marka la dhameystiro.
Madaxweyne Mr Obiang oo xukunka ku qabsadey 33 sano ka hor afgambi military oo dhiig ku qubtey kaasi oo uu talada kala wareegay Adeerkiis wuxuu ku macneeyey qorshaha dhismaha caasimada cusub mid uu ku doonayo in uu ku xaqiijiyo amaanka xukunkiisa oo sanadkii 2004-tii la isku dayay in afka ciida loo daro ka gadaal markii uu fashilmay afgambi ay qayb ka ahaayeen wadamo shisheeye sida uu ku doodayo Madaxweyne Obiang.
Obiang wuxuu sheegay in afgambigaasi laga soo magaalay wadamada Mareykaka, Ingiriiska iyo Spain, isagoo wareysi arintan ku aadan ku yiri “ ‘Wiilka ay dhashay Margaret Thatcher lug weyn ayuu ku lahaa afgambiga la isku dayey in la igu rido, macquul ma ahan in Spian, London, South Africa & Mareykanka gudahood lagu abaabulo afgambi military iyadoo aanay la socon sirdoonka wadamadaasi”.
Afgambigii la isku dayay in lagu rido ninkan waxaa maleegay Simon Mann oo ahaa calooshiis u shaqeyste ka soo jeeday Ingiriirska, iyadoo uu dhaqaalaha ku baxay afgambigaasi uu lug lahaa Mark Thatcher,oo ah nin ay dhashay Ra’isalwasaarihii hore ee dalka Britain Margaret Thatcher.
Afgambigii la isku dayey in lagu rido xukunka Mr Obiang ayaa waxaa hogaaminayey Nicolaas Servaas “Nick” du Toit oo ka mid ahaa sarakiisha wadanka Equatorial Guinea, kaasi oo lagu xukumay xabsi daa’in, wallow cafis madaxweyne lagu sii daayey 2009, iyadoo Simon Mann oo ahaa ninkii loo soo xilsaaray fulibta afgambigaasi oo adeegsanayey Toit iyo 69 nin oo kale oo ahaa calooshad u dhashay wadamada South Africa & Armenia kuwaasi oo dhamaantood lagu qab qabtey Equatorial Guinea & Zimbabwe.
Simon Mann ayaa markii uu fashilmay afgambigaasi waxaa lagu qbatey wadanka waxaana isaga iyo 69 nin oo kale oo afgambiga qaybta ka ahaa lagu xukumay xabsi ku aadan maleegida afgambi iyo ay diyaarad sidey calooshood u shaqeystayaasha ay wadankaasi ku dajiyeen.
Sanadkii 2007-dii ayaa dawlada Zimbabwe waxay u musaafurisay ninkan wadanka Equatorial Guinea ka gadaal markii Madaxweyne Obiang uu u balanqaaday Madaxweyne Robert Mugambe-ga Zimbabwe in ninkaasi aan toogasho lagu xukumi doonin, inkastoo qareenadii u doodayey Simmon Mann ay ku doodeen in aanay sharci aheyn in ninkaasi loo gudbiyo Equatorial Guinea balse taasi uu u sameeyey Madaxweyne Mugambe si uu uga helo Madaxweyne Obiang saliida uu hodonka ku yahay wadankiisa.
Dalka Equatorial Guinea oo hada ka hor sarkaal Mareykan ah uu ku tilmaamay Kuweit-da cusub (New Kuwait) waa wadan hodon ku ah soo saarista saliida, iyadoo wadankasi lagu tilmaamo wadamada ay malaayiinta doolar ka soo gasho saliida, balse dadka wadankaasi waxay la’a yihiin biyo nadiif ah, caafimaad iyo waliba arimaha kale ee nolasha aasaasiga u ah.
Madaxweyne Obiang ayaa ka taajiray xukunka uu hayo iyo waliba saliida wadankiisa oo uu xisaab la’aan uu u maamulo, waxaana wargeyska Fobres uu ku sheegay warbixin uu baahiyey in uu ka mid yahay ninkaasi hogaamiyaasha dunida ee ugu dhaqaalaha badan, iyadoo la sheegay in hantidiisu ay gaarayso 600 milyan oo doolar.
Madaxweyne Mr Obiang waxaa la sheegay in uu qabo cudurka Kansarka loo yaqaan Prostate cancer oo ah Kansar ku dhaca macdanta ragga, waxaana jira warar sheegaya in uu u diyaariyey in uu xukunka kala wareego wiilkiisa Teodoro Nguema Obiang Mangue oo ilaa iyo bishii May ee sanadkan ahaa Madaxweyne kuxigeenka labaad ee qaabilsan arimaha difaaca., isagoo sidoo kale soo qabtey xilka wasiirka beeraha iyo Kaymaha.
Diseenbar 22, 2012 at 7:57 am
walahi waa yaaab africa waa danbaysaaa